Makeup Remover Wipes လေးတွေသုံးရတာကြိုက်လား ဒါဆိုရင်တော့ သတင်းကောင်းနော်…. | CosmeticMyanmar
Home » Article » Makeup Remover Wipes လေးတွေသုံးရတာကြိုက်လား ဒါဆိုရင်တော့ သတင်းကောင်းနော်….
Makeup Remover Wipes လေးတွေသုံးရတာကြိုက်လား ဒါဆိုရင်တော့ သတင်းကောင်းနော်….
မိတ်ကပ်လိမ်းပြီး တစ်ဆင့်ချင်းပြန်ဖျက်နိုင်ရင်တော့ skin care အတွက်အကောင်းဆုံးလို့ဆိုရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အချိန်မရတဲ့အခါ၊ cleansing product တွေအများကြီးသယ်သွားဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အခါတွေမှာတော့ remover wipes လေးတွေကိုပဲ အားကိုးရတာပေါ့နော်။ ဒီလို makeup remover wipes လေးတွေကိုမှ သုံးရတာအရမ်းအဆင်ပြေစေမယ့် Neutrogena ရဲ့ ပစ္စည်းအသစ်လေးကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ဒီ Neutrogena Makeup Remover Cleansing Towelettes လေးတွေက ဈေးကွက်ထဲမှာနာမည်ရပြီးသား product တစ်ခုလည်းဖြစ်ပြီးသားပါ။ မသုံးဘူးသေးတဲ့ ပျိုပျိုတို့ ကိုကိုတို့အတွက် မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ cleansing towelettes တွေက waterproof makeup အထိပါသန့်စင်ပေးနိုင်တာကြောင့် ကိုယ်လိမ်းထားတဲ့ မိတ်ကပ်ရဲ့ 99.3% ကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်း mild ingredients တွေဖြစ်လို့ မျက်ကပ်မှန်တပ်တဲ့သူတွေပါ စိတ်ချလက်ချ မျက်လုံးနားတစ်ဝိုက်ကို သုံးလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်။ ရေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ မျက်နှာသစ်ပေးစရာမလိုတဲ့အထိ ကောင်းတဲ့ makeup remover cleansing towelettes လေးတွေမို့လို့ လူကြိုက်များတဲ့ ပစ္စည်းလေးတစ်ခု ဆိုလည်း ဟုတ်ပါတယ်။
အခု Neutrogena ကနေ ဒီ towelettes လေးတွေကို single pack နဲ့ထုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပါပဲနော်။ တစ်ခုချင်းစီကို တစ်ခါသုံးစာအတွက် သီးသန့် pack လေးတွေနဲ့ လာတာကြောင့် hygiene အတွက်လည်းပိုစိတ်ချရတယ်လေ၊ ပြီးတော့ တစ်ခါသုံးပြီးလို့ pack ကိုသေချာမပိတ်မိရင် အထဲကကျန်တဲ့ towelettes တွေ လေသလပ်ပြီး ခြောက်သွားမှာလည်း မပူရတော့ပါဘူး။ ဘယ်နေရာသွားသွား အများကြီးလည်းသယ်သွားစရာမလိုတော့တာကြောင့် အဆင်ပြေတာထပ်ကို ပိုအဆင်ပြေစေနိုင်မှာပါ။
ဒီ Neutrogena ရဲ့ Makeup Remover Cleansing Towelettes လေးတွေကို online ကနေဖြစ်ဖြစ်၊ oversea trip သွားရင်းနဲ့ Watson လို drugstore တွေကဖြစ်ဖြစ် အလွယ်တကူဝယ်လို့ရပါတယ်လို့လည်း သတင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။
sources : https://www.neutrogena.com
Tags: Neutrogenaမိတ်ကပ်ဖျက်ဆေး / Makeup Remover